Iingcebiso eziwusizo kwi-Semalt On Indlela yokukhusela ama-imeyili angafunekiyo kwi-Akhawunti yakho ye-Gmail
Ukufumana ii-imeyile ezingafunekiyo neenkohliso ezivela kwi-akhawunti yakho ye-Gmail kunokubangela ukucasula. I-Gmail ifake phambili iifayile eziphambili zokukhusela ii-imeyli ze-spam ezivela kwiintlobo zeposi ezinobungozi kunye nabathumeli abathile. Ukuba ufumene i-imeyli yogaxekile, i-Gmail yenza kube lula kuwe ukuvimba ii-imeyili ezixhamlayo ngokusisigxina - cool cat casino coupon no deposit.
I-Ross Barber, i-10 (Semalt ingcali, ithi kwiminyaka edlulileyo, abagaxekile nabahlaseli basebenzise ii-imeyile ezibhaliweyo ukuze batshise ulwazi oluvela kumakhompyutha abasebenzisi bokugqibela. Ukuba ucofa i-imeyile ekhohlisayo kwi-akhawunti yakho ye-Gmail, unokuthi uqondiswe kwiwebhusayithi enobungozi apho abahlaseli banokufumana ngokukhawuleza ulwazi lwakho lwezezimali kunye neephasiwedi. Ekuhambeni kwexesha, abagaxekile benza imali yangempela ehlawulwa kubo ngemibutho njengemali yentengiso. Iimeyile ezingafunekiyo kufuneka zingabi yingxaki ebalulekileyo echaphazela umkhankaso wakho okanye imisebenzi. Yenza i-imeyli ye-gugus ibe yincinci nje ngokunciphisa inani le-imeyile engafunekiyo ithunyelwe kwi-akhawunti yakho.
njani ukuvimbela abasebenzisi kwi-akhawunti yakho ye-Gmail usebenzisa izihlungi zogaxekile
Xa kuziwa ekuthintela i-imeyli yogaxekile kwi-akhawunti yakho ye-Gmail, ukusebenzisa izihlungi zogaxekile kufuneka kube yindlela yokuqala yokuqwalasela. Izihlungi ze-Spam zichonga apho ezininzi ze-imeyile zakho ezingafuneki zivela kuyo, izixhobo zobuchwepheshe zee-imeyile ezixhambileyo, indawo ehlanganiswe yi-imeyile, kunye nenani labantu abafumana ii-imeyile ezingafunwanga.
Ukuvimba ii-imeyile ezinomsindo kunye nezikhohlisi ezivela kubathumeli abathile ukusuka ekugqibeleni kwi-akhawunti yakho ye-Gmail, wongeza nje abathumeli kwibala lakho lokuvimba kwe-Gmail. Emva kokufumana i-imeyli engafunekiyo, khangela kwaye uqhosha 'kuboniswe kwikona ephezulu ekunene ye email.
Khetha ngokusebenzisa iinketho ezibonisiweyo emva kokuchofoza umgca ongezantsi, kwaye nqakraza iqhosha elithi 'Block Sender'. Kwixesha elizayo, onke ama-imeyili angafunekiyo avela kumthumeli ovinjiweyo atshintshele ngokuzenzekelayo kwifolda 'engenangxaki'. Ngenhlanhla, i-Gmail ikunika ithuba lokuvulela abathumeli bavalelwe ngengozi.
Iinkcazo malunga nendlela yokubika i-imeyli yogaxekile
Xa ufumanisa i-imeyli yogaxekile kwi-akhawunti yakho ye-Gmail, akudingeki ukwesaba. Ukuqakraza uphawu lokutshekisha olukuluhlu lwee-imeyile okanye usebenzisa iifayile zibonelela ngesisombululo esona siphumo. I-Google isebenzisa iingxelo ezifakwe ngabasebenzisi bokugqibela ukucoca isihlungi se-spam kwaye zenze ngcono. Izihlungi zogaxekile zihambisa iziphumo ezilungileyo kakhulu. Nangona kunjalo, ezinye ii-mail ezingenamsebenzi zihlala zifumana indlela yokufikelela kwiakhawunti yakho ye-Gmail. Ukuxela i-imeyili engenamsebenzi efunyenwe kwi-akhawunti yakho, nqakraza 'inqolo ehlayo' iboniswe ngasekunene kwemeyile engenakufumana.
Skrolela phantsi kohlu lweenketho eziqulethwe phantsi kwecitshulwa phantsi kwaye nqakraza 'Bika ingxelo yogaxekile'. Emva kokumakisha okanye ukubika imiyalezo kunye ne-imeyile, umxholo we-junk uthunyelwa kwi-'folda yangasese. ' Gcina ukuvimba nokubika i-imeyile engafunekiyo kwi-Gmail kwaye unciphise inani leefayili ezingenanto ezithunyelwe kuwe ngabagaxekile nabahlaseli.
I-Gmail ithatha ngokukhuselekileyo i-akhawunti yakho ye-Gmail. Ungavumeli ibhokisi lakho lokungenayo lifumane ilayithwe ngeefayile ezingenanto kunye nama-imeyili angafunekiyo. Gwema ukufumana ii-imeyli ezikhohlisayo kubathumeli abathile ngokuzifaka kwiluhlu lwakho lwebhloko. Ukunqanda abathumeli abaqhotyoshelweyo kwirejista yakho yengozi kungenziwa ngokuchofoza 'umcibisholo ophantsi' kwaye ucofa 'ukhetho'.